ပုံရိပ်နဲ့ သိက္ခာ | FOX Sports Myanmar
အခုတလော မြင်လိုက်ဖတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေထဲမှာ အမေရိကန်အမျိုးသမီးအသင်းခေါင်းဆောင်ရာပီးနိုးနဲ့ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ စကားနဲ့ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်လေးကို ဆက်စပ်စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အကျယ်ကြီး မပြောတော့ဘူး။ အခြေခံကတော့ ရာပီးနိုးရဲ့ ပုဂ္ဂိလိက ခံစားချက်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်သွား တဲ့အပြုအမူအပေါ် သမ္မတထရမ့်ကဝေဖန်လိုက်တာကစပြီး တွစ်တာလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ အပြန်အလှန်စကားအခြေတင်ဖြစ် သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက စံပြဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတဲ့ အမေရိကန်မှာမို့လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူသားတိုင်းမှာ လွတ်လပ်တဲ့လူ့ အခွင့်ရေးအပြည့်အ၀ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားပေါ်လွင်ခဲ့သလို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာ အသားလွတ်ဝေဖန်လာမှုမှာ သမ္မတဖြစ်နေပါစေ ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ရာပီးနိုးရဲ့ ရပ်တည်မှုက လေးစားအားကျစရာကောင်းပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတဆိုတဲ့ရာထူးဟာ လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ သြဇာအာဏာအမြင့်မားဆုံးရာထူးဖြစ်တယ်လို့ လူအ များစုက လက်ခံထားပေမယ့် ဒီလိုအနေအထားမှာ တုန့်ပြန်ဖို့ဝန်မလေးခဲ့တဲ့ ရာပီးနိုးကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက အားကစားဝါသနာ ရှင်တွေက ထောက်ခံအားပေးခဲ့သလို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ရပ်ဝန်းမှာ လူတွင်ကျယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတထရန့်ကို ဝေဖန်မှုတွေကလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့် မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက် ဘောင်ကျော်ပြီး စွက်ဖက်ခဲ့တာကြောင့် အားကစားရပ်ဝန်းမှာ သိက္ခာကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အမေရိကန်အမျိုးသမီးအသင်းခေါင်းဆောင်ရာပီးနိုးနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကြား ထဲက ပုဂ္ဂလိက ပြဿနာတစ်ခုဆိုပေမယ့် တွေးကြည့်ရင် သင်ခန်းစာယူလို့ရတာတွေအများကြီးပါ။ အဓိကကတော့ ပုံရိပ်နဲ့ သိက္ခာ ဆိုတဲ့ စိတ္တဇနာမ်နှစ်ခုရဲ့ အချိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ကနေ သမ္မတဖြစ်လာတဲ့လူ ပီပီ သူရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကို လှုပ်ခတ်အောင်၊ လူသိများအောင်လုပ်ပြီး ကိုင်တွယ်တဲ့ နည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးသူပါ။ ဒါကြောင့် လည်း အခုကိစ္စမတိုင်ခင်ကတည်း စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်စကားတွေနဲ့ မကြာခဏ မျက်နှာပျက်ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာ လိုပြောရင်တော့ ရာဇအိနြေ္ဒမဲ့တယ် လို့ပြောမလားပဲ။ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေက သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို တိုက်စားခဲ့ပြီး သူ့ပြည်သူတွေဆီက လေးစားမှု၊ ကြည်ညိုမှုတွေကို အားနည်းလာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် နှစ်ခုလုံးမှာ ပေါက်ရောက်သူဖြစ်နေတာကြောင့် ရာပီးနိုးနဲ့ပြဿနာလိုအထိမနာခဲ့ပါဘူး။ ဒီပြဿနာမှာတော့ သူနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မ ရှိတဲ့ နယ်ပယ်မှာ စကားသွားကျွံမိခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံးမှာ သူ့အနေနဲ့ ပြန်ချေပလို့မရဘဲ ရာပီးနိုးရဲ့ ရိထေ့ထေ့ပြောခဲ့တဲ့ “သမ္မတနဲ့ တွေ့ဖို့မအားသေးဘူး” အပြောကြောင့် ပြည်သူတွေက သူ့ကိုလှောင်ပြုံးနဲ့ဝိုင်းကြည့်တဲ့ဒဏ်တွေကို ခံနေရပါပြီ။ ပြောချင်တာက ဒေါ်နယ်ထရန့်ဆိုတဲ့ပုံရ်ိပ်ဟာ ကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူသာ ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ့်တာဝန်ကို ကျေပွန်ခဲ့ရင် ဘယ်သူကမှ ဒါမျိုးသိက္ခာချလို့မရပါဘူး။ အခုတော့ . . .
ဒီပြဿနာနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ပြည်တွင်းဘောလုံးမှာလဲ ပြဿနာလည်းတစ်ခု တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဇွဲကပင်အသင်းနဲ့ သီဟထက်အောင်တို့ ကြားကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဇွဲကပင်အသင်းက ကစားသမားရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ခြေစွမ်းကို အားမရလို့ ပွဲက စားခွင့်မပေးပါဘူး။ ဒါကိုမကျေနပ်တော့ ကစားသမားက လူမှုကွန်ယက်မှာပြဿနာရှာသလို အသင်းကိုလည်း ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် မပူးပေါင်းပဲနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အသင်းဖက်က ဒီအဖြစ်အပျက်ကို စာနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အပြင် အသင်းက ကြိုတင် ယူထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်း ပြန်ပေးဖို့သတိပေးထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သီဟထက်အောင်ဟာ ကစားသမားကောင်း(၁)ယောက်ဖြစ်သလို ယူ(၂၀)ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်အသင်းရဲ့ အဓိကကစား သမား ဆိုတဲ့ပုံရိပ်က ခိုင်မာပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဇွဲကပင်အသင်းနဲ့ပြဿနာမတိုင်ခင်ကတည်းက ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်းမှာလည်း ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလည်း ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုဇွဲကပင်အသင်းနဲ့ပြဿနာမှာ ဘယ်သူမှားလဲ ဘယ်သူမှန်လဲ မသိရပေမယ့် လောလောဆယ်အမြင်အရတော့ သီဟထက်အောင်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်ကျော်နေခဲ့ပါတယ်။ ပရိုကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အသင်းမှာကစားခွင့်ရတာမရတာထား အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းရှိနေတဲ့ကစားသမားဟာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်အသင်းအစီ အစဉ်တွေကို ပျက်ကွက်လို့မရပါဘူး။ ဒါမျိုးလုပ်ရပ်မျိုးကို ယူ-၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမတိုင်ခင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာကြောင့် နည်းပြကြီး ဂတ်က အသင်းကထုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပေမယ့် အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ တောင်းပန်မှုနဲ့ ဆက်နေခွင့်ရခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် သီဟထက်အောင်ဟာ ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်အဖြေမထွက်ခင်ကတည်းက သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာက နိမ့်ပါးခဲ့သလို သူ့ရဲ့ မူလကမကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့် ကလပ်အသင်းတွေကရော ဘေးကပရိသတ်တွေကပါ သူ့အပေါ် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။
လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရှင်သန်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရပ်ရှိမှ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လေးစားကြည်ညိုမှု ကိုရမှာပါ။ အရင်ကတည်းက လူလေးစားအောင်မနေပဲ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာမှ လေးစားမှုလိုချင်တယ်၊ မျှတမှုလိုချင်တယ်လို့ ပြောလာရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လှောင်ရယ်သံတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမှာပါ. . . .
စာကြွင်း ။ ။ ဒီစာမှာရေးခဲ့တာတွေအကုန်လုံးက ဘယ်သူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပါဘူး။ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံးကိုလေးလဲလေးစားကြည်လည်းကြည်ညိုပါတယ် . . .
အခုတလောူမင်လိုက်ဖတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတေထြဲမြာ အမေရိကန်အမဵြိးသမီးအသင်းခေၝင်းဆောင်ရာပီိးုိံးနဲႛ သမ္ထတ ဒေၞနယ်ထရမ့်တိုႛ စကားနဲႛ အူပန်အလန်ြတိုက်ခိုက်ုကတဲ့အူဖစ်လေးကို ဆက်စပ်စဉ်းစာူးဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။ူဖစ်စဉ်ကတော့ အားလုံး သ္ဘိပီးသာူးဖစ်တာေုကာင့် အကဵယ်ဋ္ဌကီး မေူပာတော့ဘူး။ အေူခခံကတော့ ရာပီိးုိံးရဲႚ ပုဂ္ဂိလိက ခံစားခဵက်တစ်ခုေုကာင့်ူဖစ်သြား တဲ့အူပအြမူအပေၞ သမ္ထတထရမ့်ကဝေဖန်လိုက်တာကစ္ဘပီး တစ်ြတာလူမကြန်ြယက်ပေၞမြာ အူပန်အလန်ြစကားအေူခတင်ူဖစ် သြားတာူဖစ်ပၝတယ်။
ဒၝက စူံပဒီမိုကရေစီိုိံင်ငံဆိုတဲ့ အမေရိကန်မြာမိုႛလိုႛူဖစ်ခဲ့တဲ့အူဖစ်လိုႛေူပိာုိံင်ပၝတယ်။ လူသားတိုင်းမြာ လတ်ြလပ်တဲ့လူႛ အခငြ့်ရေးအူပည့်အဝရြိနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားပေၞလင်ြခဲ့သလို ကိုယ်နဲႛမဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်မြာ အသားလတ်ြဝေဖန်လာမမြာ သမ္ထတူဖစ်နေပၝစ္ဘေငိမ်ခံနေမြာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ရာပီိးုိံးရဲႚ ရပ်တည်မကြ လေးစားအားကဵစရာကောင်းပၝတယ်။
အမေရိကန်ိုိံင်ငံရဲႚ သမ္ထတဆိုတဲ့ရာထူးဟာ လက်ရြိကမ္တာပေၞမြာ ဩဇာအာဏာအူမင့်မားဆုံးရာထူးဖစ်တယ်လိုႛ လူအ မဵားစုက လက်ခံထားပေမယ့် ဒီလိုအနေအထားမြာ တုန်ႛူပန်ဖိုႛဝန်မလေးခဲ့တဲ့ ရာပီိးုိံးကို ကမ္တာတစ်ဝန်းလုံးက အားကစားဝၝသနာ ရင်ြတေကြ ထောက်ခံအားပေးခဲ့သလို ကိုယ်နဲႛမဆိုင်တဲ့ ရပ်ဝန်းမြာ လူတင်ြကဵယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ သမ္ထတထရန်ႚကို ဝေဖန်မတြေကြလည်း မနည်းမနောပၝပဲ။ ဒီူဖစ်စဉ်မြာ သမ္ထတဋ္ဌကီးဒေၞနယ်ထရန်ႛ မြားတယ်မန်ြတယ်ဆိုတာထက် ဘောင်ကေဵာ်္ဘပီး စက်ြဖက်ခဲ့တာေုကာင့် အားကစားရပ်ဝန်းမြာ သိက္ခာကဵဆင်းခဲ့ရတယ်လိုႛေူပာရမြာပဲ။
ဒီအူဖစ်အပဵက်ဟာ အမေရိကန်အမဵြိးသမီးအသင်းခေၝင်းဆောင်ရာပီိးုိုံးနဲႛ အမေရိကန်သမ္ထတ ဒေၞနယ်ထရမ့်တိုႛုကား ထဲက ပုဂ္ဂလိကူင်္ပံနာတစ်ခုဆိုပေမယ့် တြေုးကည့်ရင် သင်ခန်းစာယူလိုႛရတာတေအြမဵားဋ္ဌကီးပၝ။ အဓိကကတော့ ပုံရိပ်နဲႛ သိက္ခာ ဆိုတဲ့ စိတ္ဈဇနာမ်ိံစ်ြခုရဲႚ အခဵြိူးဖစ်ပၝတယ်။ ဒေၞနယ်ထရန်ႛဟာ စီးပြားရေးသမားတစ်ယောက်ကနေ သမ္ထတူဖစ်လာတဲ့လူ ပီပီ သူရင်ဆိုင်ရတဲူ့င်္ပံနာကို လပ်ြခတ်အောင်၊ လူသိမဵားအောင်လုပ်္ဘပီး ကိုင်တယ်ြတဲ့ နည်းစနစ်ကိုကဵင့်သုံးသူပၝ။ ဒၝေုကာင့် လည်း အခုကိင်္စမတိုင်ခင်ကတည်း စည်းလတ်ြဘောင်လတ်ြစကားတေနြဲႛ မုကာခဏ မဵက်ြိာံပဵက်ခဲ့ရတာတေရြိပၝတယ်။ူမန်မာ လိုေူပာရင်တော့ ရာဇအိေိူံ္ဋမဲ့တယ် လိုႛေူပာမလားပဲ။ အဲဒီလိုအေူခအနေတေကြ သူႛရဲႚ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို တိုက်စားခဲ့္ဘပီး သူႛူပည်သူတေဆြီက လေးစားမြ၊ုကည်ညိမြတြေကြို အားနည်းလာစေခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် သူဟာ စီးပြားရေးနဲႛ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ိံစ်ြခုလုံးမြာ ပေၝက်ရောက်သူဖစ်နေတာေုကာင့် ရာပီိးုိံးနဲႛူင်္ပံနာလိုအထိမနာခဲ့ပၝဘူး။ ဒီူင်္ပံနာမြာတော့ သူနဲႛ အကဵမြ်းတဝင်မ ရြိတဲ့ နယ်ပယ်မြာ စကားသြားကဵြံမိခဲ့တာပၝ။ အခုနောက်ဆုံးမြာ သူႛအနေနဲႛူပန်ခေဵပလိုႛမရဘဲ ရာပီိးုိံးရဲႚ ရိထေ့ထေ့ေူပာခဲ့တဲ့ “သမ္ထတနဲႛ တြေႚဖိုႛမအားသေးဘူး” အေူပာေုကာင့်ူပည်သူတေကြ သူႛကိုလြောင်္ဘပြံးနဲႛဝိုင်ုးကည့်တဲ့ဒဏ်တေကြို ခံနေရပၝ္ဘပီ။ေူပာခဵင်တာက ဒေၞနယ်ထရန်ႛဆိုတဲ့ပုံရ်ိပ်ဟာ ဋ္ဌကီးမားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖစ်ပၝတယ်။ သူသာ ကိုယ့်နေရာမြာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ့်တာဝန်ကို ကေဵပန်ြခဲ့ရင် ဘယ်သူကမြ ဒၝမဵြိးသိက္ခာခဵလိုႛမရပၝဘူး။ အခုတော့ . . .
ဒီူင်္ပံနာနဲ့ မရြေးမြေိာံင်းမြာပဲူပည်တငြ်းဘောလုံးမြာလဲူင်္ပံနာလည်းတစ်ခု တြေႚလိုက်ရပၝတယ်။ ဇြဲကပင်အသင်းနဲႛ သီဟထက်အောင်တိုႛုကားကူင်္ပံနာူဖစ်ပၝတယ်။ ဇြဲကပင်အသင်းက ကစားသမားရဲႚအားထုတ်မနြဲႚေူခစမြ်းကို အားမရလိုႛ ပြဲက စားခငြ့်မပေးပၝဘူး။ ဒၝကိုမကေဵနပ်တော့ ကစားသမားက လူမကြန်ြယက်မြာူင်္ပံနာရြာသလို အသင်းကိုလည်း ကိုယ့်သဘောနဲႛ ကိုယ် မပူးပေၝင်းပဲနေခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီမြာ အသင်းဖက်က ဒီအူဖစ်အပဵက်ကို စာနဲႛထုတ်ူပန်ေုကညာခဲ့တဲ့အူပင် အသင်းက ဋ္ဌကိတြင် ယူထားတဲ့ငြေေုကးတေကြိုလည်ူးပန်ပေးဖိုႛသတိပေးထားတာတြေႚခဲ့ရပၝတယ်။
သီဟထက်အောင်ဟာ ကစားသမားကောင်း(၁)ယောက်ူဖစ်သလို ယူ(၂၀)ကမ္တာႛဖလားဝင်အသင်းရဲႚ အဓိကကစား သမား ဆိုတဲ့ပုံရိပ်က ခိုင်မ္ဘာပီးသားပၝ။ ဒၝပေမယ့် သူဟာ ဇြဲကပင်အသင်းနဲႛူင်္ပံနာမတိုင်ခင်ကတည်းက ရန်ကုန်ယိူုိံက်တက် အသင်းမြာလည်ူးင်္ပံနာူဖစ်ခဲ့ဖူးသလို လူမကြန်ြယက်ပေၞမြာလည်း ငြေေုကးနဲႛပတ်သက်တဲူ့င်္ပံနာတေရြိခဲ့ဖူးတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ အခုဇြဲကပင်အသင်းနဲႛူင်္ပံနာမြာ ဘယ်သူမြားလဲ ဘယ်သူမန်ြလဲ မသိရပေမယ့် လောလောဆယ်အူမင်အရတော့ သီဟထက်အောင်ရဲႚ လုပ်ရပ်ဟာ သူလုပ်ပိုင်ခငြ့်ဘောင်ကေဵာ်နေခဲ့ပၝတယ်။ ပရိုကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲႛ အသင်းမြာကစားခငြ့်ရတာမရတာထား အသင်းနဲႛစာခဵပ်ြသက်တမ်းရြိနေတဲ့ကစားသမားဟာ ကိုယ့်သဘောနဲႛကိုယ်အသင်းအစီ အစဉ်တေကြို ပဵက်ကက်ြလိုႛမရပၝဘူး။ ဒၝမဵြိးလုပ်ရပ်မဵြိးကို ယူ-၂၀ ကမ္တာႛဖလားမတိုင်ခင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာေုကာင့် နည်ူးပဋ္ဌကီး ဂတ်က အသင်းကထုတ်ဖိုႛဆိံ္ဋရြိခဲ့ပေမယ့် အဖြဲႚခဵပြ်ဥက္ကှူ ဦးဇော်ဇော်ရဲႚ တောင်းပန်မနြဲႛ ဆက်နေခငြ့်ရခဲ့တာပၝ။
ဒၝေုကာင့် သီဟထက်အောင်ဟာ ဘယ်သူမြားတယ်ဘယ်သူမန်ြတယ်အေူဖမထက်ြခင်ကတည်းက သူႛရဲႚ ဂုဏ်သိက္ခာက နိမ့်ပၝးခဲ့သလို သူႛရဲႚ မူလကမကောင်းမန်ြတဲ့ပုံရိပ်တြေေုကာင့် ကလပ်အသင်းတေကြရော ဘေးကပရိသတ်တေကြပၝ သူႛအပေၞ ယုံကည်မကြင်းမဲ့သြားတဲ့အူဖစ်မဵြိးရောက်သြားခဲ့ပၝ္ဘပီ။
လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကဵင်နဲႛ ရင်ြသန်အသက်ရင်ြရတာူဖစ်္ဘပီး ကောင်းမန်ြတဲ့လုပ်ရပ်ရြိမြ ပတ်ဝန်းကဵင်ရဲႚလေးစာုးကည်ညိမြ ကိုရမြာပၝ။ အရင်ကတည်းက လူလေးစားအောင်မနေပဲူင်္ပံနာတစ်ခုဖစ်လာမြ လေးစားမလြိုခဵင်တယ်၊ မ္တွတမလြိုခဵင်တယ်လိုႛေူပာလာရင် ပတ်ဝန်းကဵင်ရဲႚ လြောင်ရယ်သံတေနြဲႛပဲရင်ဆိုင်ရမြာပၝ. . . .
စာုကငြ်း ။ ။ ဒီစာမြာရေးခဲ့တာတေအြကုန်လုံးက ဘယ်သူႛကိုမမြရည်ရယ်ြပၝဘူး။ တိုက်ဆိုင်မတြေရြိသြားရင် ခငြ့်လတ်ြပၝဗဵ။ ကဵန်ြတော်ကတော့ အားလုံးကိုလေးလဲလေးစာုးကည်လည်ုးကည်ညိပြၝတယ် . . .
Home Football International Football ပုံရိပ်နဲ့ သိက္ခာ